Ngubani Ochaza Ubuchwepheshe eNkampanini Yakho? | Martech Zone
Ngubani Ochaza Ubuchwepheshe eNkampanini Yakho?
NgoLwesithathu, July 8, 2009 NgeSonto, ngoFebhuwari 9, 2014 Douglas Karr
Incazelo yezobuchwepheshe yile:
ukusetshenziswa okusebenzayo kwesayensi kwezentengiselwano noma embonini
Esikhathini esedlule, ngabuza, “Uma umnyango wakho we-IT ubulala okusha“. Kwakuwumbuzo owawucela impendulo impela! Iminyango eminingi ye-IT inamandla okuvimba noma ukunika amandla ukuqamba izinto ezintsha… ingabe iminyango ye-IT ingavimba noma inike amandla ukukhiqiza nokuthengisa?
Namuhla, ngibe nenjabulo yokuhlangana noChris kusuka Ukuhlanganiswa. Kwakuyingxoxo evuthayo futhi sagcina ngokuhamba cishe imizuzu engama-45 edlule lapho sasifuna ukuya khona.
Esinye sezingcezu ezithokozisayo zengxoxo bekudingida ukuthi ngubani ophethe isinqumo sokuthenga ipulatifomu noma izinsizakalo ze-SEO. Sobabili sabubula lapho leso sinqumo siwela ezandleni zommeleli we-IT. Angizami nakancane ukujivaza ochwepheshe be-IT - ngithembele kubuchwepheshe babo nsuku zonke. Ukubhloga i-SEO isu lokuthola imikhondo… a umthwalo wokumaketha.
Kodwa-ke, kuyathakazelisa ukuthi umnyango we-IT uvame ukubeka ukuphatha ipulatifomu noma inqubo enquma imiphumela yebhizinisi. Izikhathi eziningi kakhulu, ngibona imiphumela yebhizinisi (ukuqamba izinto ezintsha, ukubuyela ekutshalweni kwemali, ukusetshenziswa okulula, njll.) Kuthatha isihlalo sangemuva esinqumweni sokuthenga.
Ekusikhetheni njengeplatifomu yabo yokubloga ezinkampani, iminyango ye-IT ivame ukukholelwa ukuthi bangasebenzisa uhlelo lwe- khulula Isixazululo sokubhuloga. Ibhulogi ibhulogi, akunjalo?
Ungakhathazeki ukuthi okuqukethwe akulungiselelwe
Ungakhathazeki ukuthi ipulatifomu ayivikelekile, ayizinzile, ayinalondolozo, ayisebenzi, njll.
Ungakhathazeki ukuthi ipulatifomu ayinabungozi kwizigidi zokubukwa kwamakhasi kanye nabasebenzisi abayizinkulungwane ezingamashumi.
Ungakhathazeki ukuthi inkampani eyakhile ichithe amakhulu ezinkulungwane zamaRandi ocwaningweni nasentuthukweni ukuqinisekisa izindlela ezihamba phambili kanye nokuhambisana nezinjini zokucinga kufakiwe.
Ungakhathazeki ukuthi i-interface yomsebenzisi ilula ukuthi isetshenziswe noma ngubani, ngaphandle kwesidingo sokuqeqeshwa okunamandla.
Ungakhathazeki ukuthi uhlelo luzenzakalelayo ngakho-ke aludingi ulwazi lokumaka nokuhlukanisa ngezigaba.
Ungakhathazeki ukuthi abasebenzi bethu baqaphe inqubekela phambili yamakhasimende ethu ukuqinisekisa impumelelo yawo.
Ungakhathazeki ukuthi ipulatifomu iza nokuqeqeshwa okuqhubekayo ukusiza ama-blogger ukuthi athuthukise amakhono awo futhi andise ukubuya kwawo ekutshalweni kwemali ngokuhamba kwesikhathi.
Nge-SEO, imvamisa kuyimpikiswano efanayo. Ngike ngaba ngakolunye uhlangothi lwempikiswano ye-SEO, ngikutshele lokho awudingi uchwepheshe we-SEO. UJeremy ungikhumbuze lokhu okuthunyelwe… doh!
Iphuzu lami bekungukuthi izinkampani eziningi kakhulu azinayo i-injini yokusesha futhi zilahlekelwa yimigwaqo eminingi efanele. Ukube benze nje i- ubuncane, okungenani bangabeka lelo sayithi elihle abasebenzise ngalo ama- $ 10k phambi kwezivakashi ezimbalwa. Lokhu okuthunyelwe kwabhalelwa iningi lezinkampani ezingenakho ukuncintisana nokungasebenzisi kahle… kwakuyisicelo sokuthi okungenani kwenziwe okungenani.
Izinkampani ezisezimbonini zokuncintisana, noma kunjalo, i-80% elungiselelwe ayisondele. Ama-90% akwanele. Ukuthola isikhundla se- # 1 ngetemu elincintisana kakhulu kudinga ubuchwepheshe benkampani eyodwa emhlabeni. Uma ukwikhasi lemiphumela yenjini yokusesha enokuncintisana okulingene, umnyango wakho we-IT ngeke ukulethe ku- # 1. Uzoba nenhlanhla uma bengakuthola ekhasini lokuqala lemiphumela.
Ubungeke ubeke umnyango wakho we-IT ukuthi uphathe iqembu lakho lokuthengisa, kepha uzobabeka baphathe ubuchwepheshe obungavimbela inkampani yakho ekutholeni ukuthengisa. Uma uzosebenzisa ubuchwepheshe ngokoqobo… qiniseka ukuthi uphenya ngokugcwele amathuba nobuhle ngaphambi kokuba ucabange ukuthi ungakwenza wedwa!
Ukumaketha Kwamasu Esikhathi Eside kuthatha Isibindi
Jul 10, 2009 ku-2: 21 AM
Kunomehluko omkhulu phakathi kokubhuloga platform kanye ne-SEO isu.
Ipulatifomu yokubhuloga iyinhlanganisela yesoftware ne-hardware, futhi iminyango ye-IT inhle kakhulu ekuhlanganiseni ndawonye. Kukhona nabathengisi abaningi abenza lo msebenzi, kungaba ngenxa yokuthi bane-software ephathelene nayo, noma ngenxa yokuthi sebengabanikazi noma baqasha i-hardware, noma ngenxa yokuthi banolwazi oluningi ekugcineni le-IT stack. Umbuzo wokuthi ukuhlukanisa kanjani ukuphathwa kwepulatifomu yakho yokubloga phakathi kwabantu abasendlini nabantu abakhishelwe ngaphandle inkinga ye-IT eyi-canonical "thenga / yakha / uboleke".
Isu le-SEO, noma kunjalo, licishe lizimele ngokuphelele kungxenyekazi yakho yokubhuloga. Ungaba ne-SEO enhle noma esabekayo ngaphandle kwesikhulumi. Kepha ukusebenzisa inkampani ye-SEO hhayi njengokusebenzisa inkampani ye-IT yomuntu wesithathu. Kufana nokuqasha ababhali bamakhophi abangahumushela imibono yakho olimini lwe-Google.
Impela, ungasebenzisa isoftware yamahhala, evulekile yomthombo. Futhi masibe nobulungiswa, uDoug — I-WordPress isebenza ngengqalasizinda evikelekile, ezinzile, engasebenzi kakhulu. Abasebenzisi beWordPress bafaka iDow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News ne-CNN — konke lokhu kudlulisa ukuhlolwa kwakho "kwezigidi zokubukwa kwamakhasi, amashumi ezinkulungwane zabasebenzisi". I-Automattic (abantu abenza i-WordPress) banezinkulungwane ezingamashumi amashumi ku- ukuxhasa ngemali, engicabanga ukuthi kuyisabelomali esihle kakhulu sokucwaninga nobunjiniyela. I-WordPress akuyona into yokudlala.
Noma kunjalo, i-WordPress iyipulatifomu yokubhuloga kuphela. Empeleni, kunjalo isigamu ipulatifomu yokubhuloga-isoftware evulekile yomthombo we-WordPress (noma kunezinsizakalo eziningi zokubamba nge-WordPress, kufaka phakathi i-WordPress.com.) Uma unentshisekelo kunoma yiliphi izinga lokuthembeka noma le-scalability, udinga ukutshala imali kwi-hardware efanelekile nobuchwepheshe.
Ngakho-ke, umnyango we-IT uqinisile ukuthi ibhulogi iyibhulogi nje futhi bangasebenzisa amathuluzi wamahhala ukwenza ingxenye yebhulogi iqhubeke. Kepha umsebenzi omningi kanye nenani elingaba khona alikho kwisoftware. Cishe lonke iphuzu lokuba ne-blog lenziwa lakwazi ngokusebenzisa isu eliphelele neqhubekayo le-SEO. Futhi uma usubona ukuthi yilokho okudingayo, kuyinto okufanele uzimisele ukuyikhokhela.
Inselelo ukuthola iminyango ye-IT ukuthi ibone ukuthi i-SEO enhle akuyona idlanzana lamaqhinga, ukuthi kunzima, ukuthi lihlala lishintsha, nokuthi lenza umehluko emhlabeni.
Jul 10, 2009 ku-2: 52 AM
Anginasiqiniseko sokuthi uyavumelana noma awuvumelani nami. Mina nawe siyazi ukuthi iDow Jones, The New York Times, People Magazine, Fox News ne-CNN abasebenzisi i-WordPress 'njengoba injalo'. Bayayisebenzisa ngaphandle kwezindleko zengqalasizinda ezengeziwe, izindleko zokuthuthukisa itimu, izindleko zokwenza izinjini zokusesha, njll. Awucabangi ukuthi basebenzisa imali befundisa abasebenzi babo ngokusebenzisa lawo mapulatifomu? Noma ukuthuthuka kokudlulisa okuqukethwe kulawo mapulatifomu? Yebo kunjalo! Ngamunye walawo mabhizinisi utshale imali eningi impela ukwenza ipulatifomu 'yamahhala' ibasebenzele.
Ibhulogi iyibhulogi nje, kepha ipulatifomu lokubhuloga ALIYO nje ipulatifomu yokubhuloga. Imitha lamandla asemqoka, ukuzenzakalela kokumaka, ukuhlukaniswa ngezigaba nokubekwa kokuqukethwe ku-Compendium kungumahlukanisi omkhulu. Kudinga ukuthi umsebenzisi achithe isikhathi esincane ekhathazeka ngokuthi 'uzobhala kanjani' ama-blog, 'kanjani' angakusebenzisa kanjani okuqukethwe, nesikhathi esiningi ekhathazeka ngokuthi 'uzokwenzani' ukubhuloga. Ama-blogger webhizinisi kufanele agxile kumyalezo wawo - hhayi ipulatifomu yabo.
Ngiyakuqinisekisa ukuthi noma imuphi umuntu angavula i-Compendium futhi abhale nge-intuitively nokuthi lokho okuthunyelwe kuzothuthukiswa. Lokhu akunjalo nge-WordPress. Iningi labantu engikufundise mathupha ukuthi ngibloga kanjani ngempumelelo nge-WordPress belingazi ukuthi belilahlekile kangakanani ngokuthunyelwe ngakunye.
Futhi, ukugxila komnyango we-IT akuvamile ukugxila ebhizinisini. Ngihlale ngikwazisa ukubuyekeza 'ontanga yami be-IT' ukuthenga kwami ​​isoftware ukuqinisekisa ukuthi angibeki inkampani engcupheni; kodwa-ke, abasoze bakwazi ukubona izinzuzo zepulatifomu noma isu kanye nomthelela walo ebhizinisini. Akukhona lokho abafundiselwe khona, ukuthi ulwazi lwabo lukuphi, nokuthi yini okufanele basetshenziselwe yona.
Vumela osomabhizinisi benze izinqumo zebhizinisi! Makube ngabeluleki babo abathembekile.
Jul 10, 2009 ku-4: 32 AM
Angivumelani noma angivumelani nephuzu lakho lonke, ngimane ngicacisa imibono yakho.
Akekho owathi abasebenzisi abakhulu be-WordPress basebenzisa isoftware ngaphandle kwezindleko zokwenza ngokwezifiso nezindleko zengqalasizinda. Uthe "ungalokothi ukhumbule ukuthi ipulatifomu ayinabungozi kwizigidi zokubukwa kwamakhasi kanye nabasebenzisi abayizinkulungwane ezingamashumi", kodwa lokho akulona iqiniso. Ngokusobala kungenzeka ukukala i-WordPress (noma i-Blogger, noma i-Drupal noma i-DotNetNuke noma i-Compendium njalonjalo) kuleli zinga, kepha kufanele utshale imali kwi-Hardware, isekela isoftware nobuchwepheshe bezobuchwepheshe. Umbuzo awukhona ukuthi ngabe kunjalo kungenzeka, kungukuthi ufuna ukukwenza wena noma ufuna omunye umuntu akwenzele khona.
Yebo, ipulatifomu yokubhuloga iyisiteji sokubhuloga nje. Kuyinhlanganisela yesoftware nehadiwe ekhiqiza ibhulogi. Impela, ezinye zinezici ezihlukile, futhi lezo zici zingaba nenani elikhulu futhi zibize imali ethe xaxa. Noma ngabe une-IndyCar, iBMW egcwele noma iloli elithembekile, unemoto yezimoto engashayelwa ukusuka endaweni eya ku-A kuye kukhomba B. Kuyiqiniso yini ukuthi ezinye zalezo zimoto zikulungele kangcono ukwenza imisebenzi ethile? Impela. Umbuzo uthi: yimuphi umsebenzi ozama ukuwufinyelela?
Nginesiqiniseko sokuthi uma ubeka umsebenzisi eceleni ne-Compendium kanye nanoma iyiphi ipulatifomu yokubhuloga evulekile, okuthunyelwe kubhulogi le-Compendium bekungashayela ithrafikhi eningi — - noma ngabe okuthunyelwe bekufana igama negama. Lokho kuyigugu elikhulu enkampanini yakho! Uma leli cala lokusetshenziswa limelwe, lenzela iphuzu lokuthengisa elimnandi le-CB.
Kepha ake sihlole kungani lokho okuthunyelwe okukodwa kungathola ithrafikhi eningi. Isizathu ikakhulu kungenxa yokuthi i-Compendium Inkampani inomsebenzi oqhubekayo wamasu. Ubuyekeza i-codebase ngaso sonke isikhathi. Uxhumanisa nokuthunyelwe kwamakhasimende ukuwasiza akhe idumela. Uhlangana namakhasimende futhi unikeze ukuqeqeshwa okwengeziwe nezinsizakusebenza. Ugcina ingqalasizinda ethembeke kakhulu. Okuningi, uma kungenjalo inzuzo enkulu yeCompendium ngaphezulu kwethuluzi lamahhala isevisi eqhubekayo nokusekelwa okunikeza isoftware yakho, amaklayenti akho, nokuqukethwe kwabo.
Futhi, lokho kuyinzuzo enhle futhi amakhasimende akho amaningi ajabule kakhulu. Kepha akuyona ingxenye eyisisekelo yesikhulumi sakho se-software ne-hardware "yesikhulumi sokubhuloga." Ungazuza umphumela ofanayo ngokusebenzisa isoftware ehlukile (kepha kungaba ngumsebenzi owengeziwe!) Lokhu empeleni kusebenza njengezinkampani DK New Media yenza nsuku zonke. Noma ngubani obambe iqhaza ekwenzeni izinqumo zokubloga ezinkampani kudingeka aqonde la ma-nuances.
Impikiswano esemqoka lapha yilapho umthwalo womnyango owodwa uphela khona nomunye uqala. Azikho izimpendulo ezilula kulowo mbuzo. Okubi kakhulu, uma noma iyiphi ingxenye yalolo layini iwela ngaphandle kwenkampani iye kumthengisi ovela eceleni, kuqala ukuba nezikhala ezimfushane phakathi kwamabhizinisi futhi kuba nzima ukuhlola ubungozi nezinzuzo. Uvikela kanjani ipherimitha lakho uma abantu abangaphandle befinyelela? Noma, ohlangothini lokumaketha: uqiniseka kanjani ukuthi umhlinzeki wepulatifomu othunyelwe angaphandle ngeke aqumbe futhi alimaze umkhiqizo wakho? Lezi zingcuphe zingaba zincane noma zikhulu, kepha azizona zero.
Nginesiqiniseko sokuthi izinqumo eziningi maqondana nobuchwepheshe zenziwa yi-IT ngaphandle kwenhlonipho eyanele ekuthintekeni kwebhizinisi. Kepha inkinga ihamba ngazo zombili izindlela — abantu bebhizinisi badinga ukuqonda kabanzi nge-IT futhi okuphambene nalokho. Ukusebenza ndawonye kunokulwisana kuzosiza wonke umuntu.
Jul 10, 2009 ku-4: 48 AM
Siyabonga ngalokho kucaciswa, uRobby! Ngizoma ngemibono yokugcina. Ngiyazethemba izinsizakusebenza zami ze-IT ukuthi zibe ngabeluleki bami ngakho-ke angenzi into ewubuwula. Kodwa-ke, ngeke ngibanikeze isinqumo sokugcina kuzingxenyekazi namasu anenzuzo enkulu yokuqhubekisela phambili ibhizinisi. Ngamunye wethu unamandla akhe futhi badinga ukuxhunyaniswa ngendlela efanele.